Acer Aspire One D260, un netbook Android con dual boot | Androidsis
I-Acer iboniswe kwiintsuku ezidlulileyo i-netbook entsha yendlu, I-Acer Aspire One D260, isixhobo esiya kuthi kuqala sithengiswe ngenkqubo yokusebenza yeWindows 7 kodwa njengenye indlela yokhetho enokuza ngaphambili ilayishwe nge Inkqubo yokusebenza ye-Android kwaye ubenakho ukuqhuba nayiphi na kwezi nkqubo zimbini zisebenzayo. Ikwavakaliswa kwinkcazo yemithombo yeendaba ukuba ukuqala nge Inkqubo ye-Android kuthatha kuphela imizuzwana eli-15 ukuba isebenze ngokupheleleyo. Ayichazwanga ngqo Inguqulelo yenkqubo ye-Android oko kuza kufakwa.
Ngokumalunga neempawu zobuchwephesha kwi-netboook, sinokuqaqambisa isikrini sayo esingasemva esine-10,1-intshi ngesisombululo seepikseli eziyi-1024 × 600. Ayisiyochuku ke ukuphathwa kwe Android Inokudideka kancinci. Ikwanekhamera ephezulu kwesikrini. Unokukhetha phakathi kweentlobo ezimbini zeeprosesa, a I-Intel Atom N455 okanye I-Intel Atom N450 zombini ngesantya se-1,66 Ghz.
Ukunxibelelana ngeWifi, iBluetooth 3.0 kunye ne-Ethernet port ukongeza kwizibuko ezi-3 ze-USB, ukuphuma kweVGA, igalelo lomsindo / ukuphuma kunye nomfundi wekhadi. Umthamo wediski enzima iya kuba kukukhetha phakathi kwe-2.0 Gb okanye i-160Gb kwaye ibhetri iya kubakho kwiifomathi ezimbini oza kuzikhetha, enye ineeseli ezi-250 eziya kuthi zisinike iiyure ezi-3 zokusebenzisa okanye enye ineeseli ezi-4 ixesha le-6 iiyure.
Okokugqibela, hlomla ukuba kuya kubakho ukubandakanya ukhetho olongezelelweyo kwimodyuli yokunxibelelana kwe-3G / UMTS.
Ukufumaneka kwe I-Acer Aspire One D260 kulindeleke ngoJulayi
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Acer Aspire One D260, i-Android netbook eneebhutsi ezimbini